ဝေါဟာရ | ဟန်ဆန်း
ကလစ်တစ်ချက်၏ တန်ဖိုးသည် ဒီဂျစ်တယ်ခေတ် တနည်း အွန်လိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွင် အလွန်အရေးပါသော တန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
October 20, 2017 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, ဝေါဟာရ.
ဖိုတိုဗုံး(Photobomb)ဆိုသည်နှင့် ထိတ်လန့်ဖွယ် တစ်စုံတရာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ယူဆရပါသည်။ ဖိုတိုဗုံးဆိုတာ တကယ်တော့ ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသည့် အကြောင်းအရာမဟုတ်ပါ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာကောင်းပြီး စိတ်ဝင်စားစရာလည်း ကောင်းပါသည်။
August 15, 2017 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, ဝေါဟာရ.
Open Source (ပွင့်လင်းရင်းမြစ်)ဆို‌သော ‌ဝေါဟာရကို သုံးစွဲရန် ၁၉၉၈ ခုနှစ် ‌ဖေ‌ဖော်ဝါရီ ၃ ရက်၌ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ Open Source ဆို‌သော စကားလုံးကို အသစ်တီထွင်၍ သုံးစွဲခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
August 15, 2016 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, ဝေါဟာရ.
အသံ၊ လေထု၊ ရေထု၊ မြေထုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းခြင်းများကဲ့သို့ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများကို အနှောက်အယှက်ပေးလာသည့် ညစ်ညမ်းမှု တစ်ခုမှာ သတင်းအချက်အလက်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပါသည်။
July 9, 2016 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, ဝေါဟာရ.
အစစ်အမှန်မဟုတ်ဘဲ ပြုပြင်စီမံထားသော အစစ်အမှန်‌လောက နှင့်အလွန်နီးစပ်အောင် ပြင်ဆင်ထား‌သော အစစ်အမှန်မဟုတ်သည့်အ‌ခြေအ‌နေတစ်ခုကို Virtual Reality ဟုခေါ်သည်။
June 14, 2016 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, ဝေါဟာရ.
‘‘လူတစ်ဦး၏ ခံစားချက်များ ကို ကိုယ်စားဖော်ပြပေးသည့် ပျော်ရွွှင်ကြည်နူးဖွယ်ရာဒီဂျစ်တယ်ရုပ်ပုံများ’’ဟု ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းလိုသည်။
April 4, 2016 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, ဝေါဟာရ.
အင်တာနက်စတင်အသုံးပြုသူများ သိအပ်သောစကားလုံး ၃ဝ
အင်တာနက်အသုံးပြု‌နေသူများအတွက် အသုံးဝင်နိုင်မည့် စကားလုံး ၃ဝ ကို တင်ပြလိုပါသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာစကားလုံးများနှင့်အတူ နည်းပညာ အ‌ကြောင်းကိုလည်း ပူးတွဲ‌လေ့လာနိုင်ပါမည်။
February 25, 2016 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, ဝေါဟာရ.
မူလရှိရင်းစွဲဖြစ်‌သောစကားလုံးများကို ‌ဖော်ပြပါ ‌ရှေ့ဆက်ပုဒ်များထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ‌ဝေါဟာရအသစ်များကို ဖြစ်‌စေသည်။ ထို‌ဝေါဟာရသည် အင်တာနက်နည်းပညာနှင့် နှီးနွယ်‌နေ‌သော‌ဝေါဟာရ များလည်းဖြစ်သည်။
February 20, 2016 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, ဝေါဟာရ.
အင်တာနက်အသိုင်းအဝန်းတွင် ပျံနှံမှုအား‌ကောင်း‌နေ‌သော ဟတ်စ်တတ်ခ်(Hashtag)ကို ‌အောက်စ်ဖိုဒ့်အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်က ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် အဘိဓာန်၏ ‌ဝေါဟာရအဖြစ် သူ‌ကောင်းပြု‌နေရာ‌ပေးခဲ့သည်။
February 18, 2016 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, ဝေါဟာရ.
ဘလူးထူးသ်(Bluetooth)ဆို‌သောစကားလုံးကို အများစုက ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီး ဖြစ်သည်။ ဘလူး(Blue)ကို အပြာ‌ရောင်ဟု ဘာသာပြန် မည်။ ထူးသ်(Tooth)ကိုလည်း ‘သွား’ဟု ဘာသာပြန်ရမည်။
February 16, 2016 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, ဝေါဟာရ.
မိုဘိုင်းဆက်သွယ်‌ရေးစနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်‌တော့မည့်အရိပ်အ‌ရောင်များ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လင်းလက်လာပြီဖြစ်သည်။ ၁ဝ နှစ်တာ ကာလနီးပါး‌နောက်ကျခဲ့သည့် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်‌ရေးစနစ်ကို အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာဖြင့် ‌နောက်ကလိုက်ရ‌တော့မည်ဖြစ်သည်။
January 11, 2016 in နည်းပညာဆောင်းပါး, ဝေါဟာရ.
SD card ဆိုသည်‌သော‌ဝေါဟာရသည် Secure Digital ၏ အတို‌ကောက်‌ဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။ Secure Digital ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန် လျှင် ဒီဂျစ်တယ်အချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းခြင်းကတ်ပြားဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာသည် တွက်ချက်ရေးစက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်တင်ဝေါဟာရမှ ဆင်းတက်လာသော စကားလုံးတစ်လုံး လည်းဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာစကားလုံးကို ၁၆၄ဝ နှောင်းပိုင်းကာလများကတည်းက အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု လေ့လာသိရှိရသည်။
January 7, 2016 in နည်းပညာဆောင်းပါး, ဝေါဟာရ.
ဝတ်ဆင်နိုင်သော ကွန်ပျူတာများကို အသုံးပြုနိုင်ရန် ၁၆ ရာ စုနှစ်ကတည်းက ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ လည်ပင်တွင် ဝတ်ဆင်၍ အသုံးပြုနိုင်သော တရုတ်ပေသီးများသည် ဝတ်ဆင်နိုင်သော ကွန်ပျူတာများ၏အစဦးပိုင်းဟု ဆိုကြသည်။ ကွန်ပျူတာသည် တွက်ချက်ရေးစက်ပစ္စည်းအဖြစ် စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
December 24, 2015 in နည်းပညာဆောင်းပါး, ဝေါဟာရ.